Shiinaha Ge soo saaraha Windows iyo Alaab-qeybiye | Dien
Dulqaadan dhumucdiisuna: 0.1mm
Saxnaanta dusha sare: λ/4@632.8nm
Tayada oogada: 60-40
Germanium-ka oo ah halbeegga 'mono crystal' oo ugu horreyn loo adeegsado kala-kiciyaha waa mid aan dhuuqin 2 atm illaa 20μm gobollada IR. Halkan waxaa loo adeegsadaa inay tahay qayb ka mid ah indhaha indhaha codsiyada gobolka IR.
Germanium waa shey aad u sareeya oo loo adeegsado soosaarida xabbiska Attenuated Total Reflection (ATR) for spectroscopy. Tixraaceedu waa sida Germanium uu u sameeyo dabiici wax ku ool ah oo ah 50% beamsplitter iyada oo aan loo baahnayn daahan. Germanium waxaa sidoo kale loo isticmaalaa si ballaaran sidii substrate loogu talagalay soosaarka miirayaasha indhaha. Germanium wuxuu wada daboolayaa 8-14 micron thermal band waxaana loo isticmaalaa nidaamyada muraayadaha ee sawirka kuleylka. Germanium waxaa lagu dahaadhi karaa 'Diamond' oo soo saareysa optic hore oo aad u adag.
Germanium waxaa lagu koray iyadoo la adeegsanayo farsamada 'Czochralski' tiro yar oo soosaarayaal ah oo ku kala sugan Beljam, USA, China iyo Russia. Tilmaanta soo noqoshada ee Germanium si dhakhso leh ayey isku beddeshaa heerkulka maaddaduna waxay noqoneysaa mid mugdi ku jirta dhammaan dhererka wax yar oo ka sarreeya 350K maaddaama farqiga farqiga u dhexeeya daadadka ay la socdaan elektaroonigyada kuleylka ah.
• Ku habboon codsiyada IR-ka u dhow
• Broadband 3 ilaa 12 μm daahan ka-hortagga milicsiga
• Ku habboon codsiyada u baahan faafitaanka hooseeya
• Aad ugu fiican codsiyada leysarka CO2 ee hooseeya
• Daaqadahaan jeermiska ah kuma gudbinayaan gobolka 1.5µm ama ka hooseeya, sidaa darteed codsigeeda ugu weyni waa gobollada IR.
• Daaqadaha Germanium waxaa loo isticmaali karaa tijaabooyin kala duwan oo infrared ah.
Gudbinta Range: 1.8 illaa 23 μm (1)
Tusmo milicsan: 4.0026 at 11 μm (1) (2)
Loss Milicsiga: 53% at 11 (m (Laba dusha sare)
Isugeynta Nuugista: <0.027 cm-1 @ 10.6 μm
Reststrahlen Fiinta: n / a
dn / dμ = 0: Ku dhowaad joogto ah
Cufnaanta: 5.33 g / cc
Barta Dhalaalka: 936 ° C (3)
Kuleylka kuleylka: 58.61 W m-1 K-1 at 293K (6)
Ballaarinta kuleylka: 6.1 x 10-6/ ° C markay tahay 298K (3) (4) (6)
Engegnaantiinna: Toos 780
Awoodda kuleylka gaarka ah: 310 J Kg-1 K-1 (3)
Dielectric Constant: 16.6 at 9.37 GHz oo 300K ah
Youngs Modulus (E): 102.7 GPa (4) (5)
Qalabaynta Xirmooyinka (G): 67 GPa (4) (5)
Jumlada Jumlada (K): 77.2 GPa (4)
Qalabyada laastikada: C11= 129; C12= 48.3; C44= 67.1 (5)
Xadka Xadidan 89.6 MPa (13000 psi)
Saamiga Poisson: 0.28 (4) (5)
Kala-baxa: Biyaha aan lagu milmin
Miisaanka kelli: 72.59
Fasalka / Qaab-dhismeedka: Dheeman Cubic, Fd3m